Bhuku redu rekudzidza reGerman, iro ratakagadzira muchimiro chee-bhuku, iro raunogona kushandisa sebhuku rekuwedzera reGerman kosi yegiredhi re9, rabuda. Tinopa iri bhuku rekuGerman rekudzidza, iro ratakagadzirira tichishandisa hurukuro dzakakurumbira uye dzinoyemurwa dzesaiti yedu, kuti ushandise.
Bhuku redu rekudzidza reGerman, iro ratakaburitsa pasi pezita reWir lernen Deutsch (WLD), rakaiswa kutengeswa paGoogle Play Market.
Bhuku redu ibhuku reGerman rekuwedzera bhuku revadzidzi vegiredhi repfumbamwe uye rakagadzirirwa vachishandisa hurukuro dzakadzama uye dzinonzwisisika dzeTurkey.
Ichowo chishandiso chinobatsira kwazvo chevadzidzi vegiredhi regumi neregumi nerimwe uye kunyangwe vegiredhi regumi nembiri vadzidzi vane marombe ekuGerman.
Kunze kwaizvozvo, iri zvakare sosi yakakosha kune avo vasingaende chero chikoro, usapinda chero kosi yeGerman uye unoda kudzidza chiGerman voga.
Mubhuku redu rakatumidzwa Wir lernen Deutsch (WLD) takagadzirira, zvidzidzo zveGerman zvinotanga kubva pakutanga, saka chishandiso chakakosha kune avo vasingazive chero chiGerman uye avo vatsva pakudzidza chiGerman.
ZVII ZVIRI Mukati zveGERMAN COURSE BHUKU?
# ZVII ZVIRI Mukati zveGERMAN COURSE BHUKU?
# BHUKU REDU REKUDZIDZA KWEGERMAN RINOGONESESA NEZVINHU ZVESE ZVENYANYA ZVEMAOKO, MABHUKU NEOMAKOMPUTA
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi gumi nemaviri yapfuura, musi wa12 Zvita 09, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa musi wa2020 Zvita 15.
Yakapihwa General General Bvunzo Inoitirwa muSivas
Chikwata cheGermany Teachers Quiz Mukurudziro Inotsigirwa neGermanx
Tags: 9. kirasi german bhuku, 9. zvidzidzo zvechiGerman, 9. kirasi german nyaya inotaura, 9th grade german bhuku rekubatsira, chidzidzo chechi German